i7s Mini ကြိုးမဲ့ Bluetooth နားကြပ်ပေါက်ဈေး ...
အစမိုဘိုင်းဖုန်းများမိုဘိုင်းအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများi7s Mini ကိုကြိုးမဲ့ Bluetooth နားကြပ်
စျေးနှုန်းသမိုင်း i7s Mini ကိုကြိုးမဲ့ Bluetooth ကိုအိတ်ဆောင် Handsfree နားကြပ် Earbuds
€ 6,75 - ဇန်နဝါရီလ 2020, 21
€ 6,05 - နိုဝင်ဘာလ 2019, 21
€ 4,96 - နိုဝင်ဘာလ 2019, 20
€ 5,06 - နိုဝင်ဘာလ 2019, 4
€ 6,05 - အောက်တိုဘာလ 2019, 19
€ 5,91 - စက်တင်ဘာလ 2019, 30
မှ: 2019 16 မေလ
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: ယူရို ၁၅၆.၈၇ - ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်၊
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 4,81 - သြဂုတ်လ 2019, 31
i7s Mini ကိုကြိုးမဲ့ Bluetooth ကိုအိတ်ဆောင် Handsfree နားကြပ် Earbuds
i7s အားကစား Mini ကိုကြိုးမဲ့ Bluetooth ကိုအိတ်ဆောင် Handsfree နားကြပ် Earbuds
အားသွင်းကိရိယာအထိုင်နှင့်အတူ TWS စမတ် Mini ကိုကြိုးမဲ့ Bluetooth ကိုနားကြပ် Earbuds I7S
Airpods I7s I8X Mini ကို In-နားကဘလူးတုသ်ကြိုးမဲ့နားကြပ်များအတွက်
TWS i7s Mini ကို Dual-ကြိုးမဲ့ Bluetooth ကိုနားကြပ် Earbuds
I7S TWS Mini ကိုကြိုးမဲ့ BT အားကစားနားကြပ် Music ကိုနားကြပ်ကို-နား Earbud နားကြပ်ကိုလက်ကမ်းအခမဲ့
နားနားကြပ်7ဘလူးတုသ်နားကြပ်ပလတ်စတစ် Shell ကနားကြပ် Mini ကိုယာဉ်မောင်း / ခုနှစ်တွင် COOLHILLS i4.2s ...
မှစ. အတု $ 26 AirPods Amazon: လုပ်ဆောင်ခြင်း & ဆန်းစစ်ခြင်း [TWS-i7s]
Padear I7S TWS Mini ကိုကြိုးမဲ့ Bluetooth ကိုနားကြပ် (ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း)
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: i7s Mini ကိုကြိုးမဲ့ Bluetooth နားကြပ်
1 နားကြပ်၏ Pair ကို, Cable ကို 1 အားသွင်း x ကို, 1 Dock (350mAh) အားသွင်း x x
i7s Mini ကိုကြိုးမဲ့ Bluetooth နားကြပ်ဗီဒီယိုများ
အဘို့အ 8 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း i7s Mini ကိုကြိုးမဲ့ Bluetooth နားကြပ်
Natallyson - 2019 10 ဇွန်
1 ။ ငါကြောင့်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးနှင့်ကျွန်မအဖြစ်မကြာမီငါ box3 ထဲက ယူ. အဖြစ်ချွတ်ယွင်းခဲ့ဝယ်ဒါက2၏တဦးတည်း၏ဤခွဲခြားရွေးယူကြ၏။ ငါကလည်းအနည်းငယ်ထူသောကြောင့်အရုပ်ဆိုးစေသည်ဒါကလုံးဝကဖုန်းရဲ့အရောင်ဖြစ်သင့်သ, ထဲတွင်နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကနားကြပ်ရဲ့အစွန်အဖျားတစ်ခုတည်းအရောင်အောက်ခြေတွင်, ငွေ, charger ကို၏အစိတ်အပိုင်းကိုမကြိုက်ကြဘူး နားဒါဟာအရမ်းများလွန်းကြီးတွေပဲ!3။ အားသာချက်ပဲတဦးတည်းအတူကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အခြားတှငျငါ2နားကြပ်နှင့်အတူတွဲခဲ့သောကြောင့်ပဲတဦးတည်းအတွက်နားမလည်ကြဘူး, ငါက strange.4 တွေ့ရှိခဲ့ပါကသုံးစွဲဖို့စူပါရိုးရှင်းတဲ့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မားဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်! ငါ charger ကိုအတွင်းပိုင်းကနေဆွဲထုတ်တဲ့အခါဘက်ထရီ 40 မိနစ် 50 န်းကျင်ကြာပါကကြီးမားပြီးအထူသည်ငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဤမျှလောက်ကြီးစွာသော၏ဖန်ဆင်းထားသည်, ထိုအသံအရည်အသွေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဒါကောင်းသောဖြစ်ပါသည်, ပျက်စီးလွယ်,3နှင့် 1 ချွတ်ယွင်းတို့နှင့်အတူကြွဝယ် ဒါဟာရိုးရှင်းစွာဘေ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်နှင့်ဝါယာကြိုးဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်လျော်ကြေးအတွက်အသံအရည်အသွေးကိုလည်း၏ sound volume ကိုကောင်းလှ၏။
ဂါဗြေလ Fonseca - 2019 10 ဇွန်
အလွန်ကောင်းသောထုတ်ကုန်ဿုံဂရိတ် finish ကို Awesome ကိုပုလင်းအဘယ်သူမျှမအလုပ်လုပ်
ယောရှုဆန်းတို့စ - 2019 10 ဇွန်
Recomendo! Grande APARELHOS funciones တာဝန် bem, pelo preço Nao Ha Melhor ။
Ninebot MAX G30 လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ် Fixed Speed ​​Cruise 350W Motor 15.3Ah ဘက်ထရီ ၆၅ ကီလိုမီတာမိုင်အကွာအဝေး
Ninebot MAX G30 လျှပ်စစ်စကူတာ Fixed Speed ​​Cruise 350W Motor 15.3Ah ဘက်ထရီ ၆၅ ကီလိုမီတာအကွာအဝေး ...